theZOMI: [mrsorcerer:37564] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူများသို့
[mrsorcerer:37564] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူများသို့
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူများသို့
ငရဲ သား's photo.
လူတိုင်းမှာ အခွင့်ရေးကိုယ်စီရှိတယ်…. အဲဒီအခွင့်ရေးဟာ လူတစ်ဦးချင်းကို နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်း သာဖြစ်တယ်…ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်မှာ နေလျှင် စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိ့ဖို့က ပိုလို့တောင်အရေးကြီးတယ်.. နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် နှင့် လူတစ်စုရဲ့ အရေး….. ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲ ?
စာချုပ်ပြင်ချုပ်ရေး နှင့် ဖျက်သိမ်းရေး…..ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲ ?
ဖျက်သိမ်းလိုက်လို့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူတွေအတွက် ဆံချည်တစ်မျှင် စာလောက်တောင် ဝမ်းမနည်းပေ့မယ်….ရင်းနှီးမြှုပ်နှုံဖို့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးပေါင်းများစွာဟာ…လက်ရှိလုပ်ကိုင်သူတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ သာပါတယ်… ဒါဆို…လက်ရှိလုပ်ကိုင်သူတွေကို စဉ်းစားထောက်ထားလို့လား……
နောင်လာမယ့် ရင်းနှီးမြုံ့နှံမယ့်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု့…. ဘယ်သူတွေဟာ နိုင်ငံ့ရဲ့ အနာဂါတ်ကို ပိုအရေးသာစေလဲ….
ပွဲလန့်အောင်လုပ်တဲသူများ နှင့် အမှန်တရားကို ရဲဝင့်စွာ ပြောဝံ့သောခေါင်းဆောင်…..ဘယ်သူဟာ ပြည်သူကို အကျိုးပြုသလဲ?
မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ပြစ်သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့က ဒါက.. ကော်မရှင်ရဲ့ အလုပ်လား တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ အလုပ်လား?
စတင်လုပ်ကိုင်ချိန်က သတ္တိရှိစွာ မရင်ဆိုင်ပဲ…ဘာကြောင့် ခုချိန်မှ အုံကြွသလဲ… သေချာတာ.. ဒီအရေးဟာ ဒေသခံတွေရဲ့ အတွင်းစိတ် အရေးသာဖြစ်ပြီး အဲဒီအရေးကြောင့် ၂၀၁၅ နှစ်မှာ မြင်ရမယ်…မျော်လင့်ချက်အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်… ဒီလိုသာ ပျောက်ကွယ်သွားရင် ဒေသခံတွေဟာ သမိုင်းရဲ့တရားခံ လုံးဝ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်.
Credit : Love Myanmar
ဒီသုံးသပ်ချက်ကို ဖတ်ပြီး .. ခင်ဗျားတို့ကို (ဒေသခံတွေမဟုတ်)
ခင်ဗျားတို့ ဘာလဲ ..... ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်...။
ခင်ဗျားတို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ ... ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်..။
ခင်ဗျားတို့ လမ်းစဉ် ဘယ် လမ်းစဉ်လဲ .. ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်..။
ဒေသခံတွေကို သမိုင်းတရားခံဖြစ်အောင်လုပ်တာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်...။
အာဏာပိုင်တွေ အကွက်ရွှေ့တာကို သိသိချည်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စီးမျောနေတာ.. ဘယ်သူတွေလဲ ..ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်...။
Steel Girl ကို စကားတတ်အောင် သင်ပေးတာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်..။
အရေးကြုံရင် မီးလောင်တဲ့နေရာမှာ မရှိတာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်...။
Performance ပြတာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်..။
NLD ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကို ဆန္ဒပြတာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်..။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးချိန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလက အခက်အခဲတိုင်း စိန်ခေါ်မှုတိုင်းကို ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်ဆန္ဒ ပြနေတာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်..။
ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကို
ပြည်သူ့ဆန္ဒ ပျက်သုန်းခြင်းနေ့ လို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်...။
ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခြင်းက ... လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စ တစ်ခုတည်းမှာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း ... ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်....။
သမိုင်းတရားခံက ... ဒေသခံမဟုတ်ပါဘူး...။
ဒေသခံကို ပွဲဆူအောင် ဆွပေးတဲ့ ...။ ခင်ဗျားတို့ပဲ
ကာယကံရှင်များကိုသာ ... ရည်ရွယ်ပါကြောင်း.....။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/14/2013 01:44:00 PM